Raha ny fanazavan’Atoa Rakotoniaina Jean Paul, filohan’ny koperativa Soamiafara mihazo an’Andoharanofotsy dia tena misy tokoa izany saingy tsy betsaka fa azo isaina amin’ny rantsan-tanana ho azy ireo manokana. Ho an’ity filohan’ny koperativa iray ity mantsy dia tsy vitan’ny asam-birao toy ny an’ny sasany ny asany fa midina ifotony manara-maso ny asan’ireo eo ambany fiadidiany mihitsy. Miezaka ny manitsy sy mananatra hatrany ireo ao amin’ny koperativany tsy manara-dalàna Rakotoniaina Jean Paul. Ho an’ireo mpamily tratra dia mahazo fampitandremana avy hatrany. Raha mbola mamerina fanindroany izy ireny dia roahina tsy misy hindra fo ilay mpamily. Nomarihiny fa tsy mijanona fotsiny amin’ny fakana ny volan’ireo taksibe miasa ao aminy ny koperativa fa tena manao ny asany tokoa. Entina hanasoavana ny mpiasa sy ny tompona fiara mpikambana ao aminy ihany ny vola azo, hoy izy.